भवानी भट्ट, मंसिर २५, २०७४
विजय घोषणाको प्रमाणपत्र बुझेपछि उनी केही बोल्न खोज्दै थिइन् । तर दुई/चार शब्द नबोल्दै उनको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्यो । ‘आज जितेर पनि खुसी हुन सक्ने अवस्था छैन,’ सोमबार कञ्चनपुर प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ को निर्वाचन परिणाम घोषणापछि निर्वाचित बिना मगरले रुँदै भनिन्, ‘यस्तो खुसीको क्षणमा पनि मेरो जीवनसाथी मसँग नहुँदा दु:खी छु ।’
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको मतगणनामा पनि नेकपा एमालेले अग्रता जारी राखेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबार साँझ ६ बजेसम्ममा कुल १५ लाख ३५ हजार ३ सय १२ मत गणना हुँदा एमालेले ५ लाख ६४ हजार ४ सय २९ मत ल्याएर पहिलो स्थान लिएको हो ।
तेस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर विना विभागीय मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले ‘ह्याट्रिक’ गरेका छन् । महोत्तरीको निर्वाचन इतिहासमा लगातार निर्वाचित हुने पोखरेल पहिलो बने ।
उदयपुरबाट डाक्टर खड्का तेस्रो पटक निर्वाचित
डिल्लीराम खतिवडा, मंसिर २५, २०७४
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डाक्टर नारायण खड्काले उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचीत भएका छन । उनको यो जीत तेस्रो पटक हो ।
रुकुममा समानुपातिकमा माओवादीलाई दोब्बर मत
हरि गौतम, मंसिर २५, २०७४
गत १० गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ प्रतिसप्रधामा दोश्रो भएको नेपाली कांग्रेस भन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले दोब्बर मत पाएको छ । समानुपातिक तर्फको अन्तिम मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभामा ४४ दलले मत पाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सोमबार बिहान ११ बजेसम्म १ सय ४२ निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । अब २३ क्षेत्रको नतिजा बाँकी छ ।
तेह्रथुमका सबै क्षेत्रमा वाम गठबन्धन विजयी
चन्द्र कार्की, मंसिर २५, २०७४
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा वाम गठबन्धनले जित हात पारेको छ । जिल्लाबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभा दुवैतर्फ वाम गठबन्धनबाट उमेदवार बनेका नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरु विजयी भएका हुन् ।
नुवाकोटमा सोमबार बिहान मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका–४ पाटीभञ्ज्याङका मनोज श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ ।
घनश्याम गौतम, मंसिर २५, २०७४
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र १ मा एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली विजयी भएका छन् । आइतबार सार्वजनिक मतपरिणामअनुसार ३७ हजार ८ सय १४ मत ल्याएर उनले तेस्रोचोटि संसदीय यात्रा पक्का गरेका हुन् ।
जारी निर्वाचनको आइतबार साँझसम्म सार्वजनिक परिणामअनुसार अधिकांश सिटमा मधेसकेन्द्रित दलले जित हासिल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका चार क्षेत्रमध्ये दुईवटामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र एक स्थानमा राजपा नेपालका उम्मेदवारले बाजी मारेका हुन् । एउटा क्षेत्रमा भने गणना जारी छ ।
न्यायपरिषदको सोमबारको बैठकमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिको प्रस्ताव पेश भएको छ ।
नगेन्द्र अधिकारी,राजकुमार कार्की, मंसिर २५, २०७४
काभ्रेका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यका ६ वटै सिटमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । सबै ठाउँमा कांग्रेस उम्मेदवार निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पहिलो शक्ति भएको एमालेले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अब गर्ने नियुक्ति बदर गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रकाश गौडेल, भवसागर घिमिरेमंसिर २५, २०७४
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘टु मेनी कुक्स स्पोइल द ब्रोथ’ । आशय, धेरै भान्छे भए सुप गतिलो बन्दैन । यो भनाइ नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा अहिले ठ्याक्कै सुहाउँछ । जलस्रोत विकासमा धेरै भान्छेहरू हुँदा कसरी विकासको आगोमा चिसो पानी पोखिरहेको छ त ? लेखमा यसैको चर्चा गर्नेछौं । पूरा पढ्नुहोस्
खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती
सम्पादकीय, मंसिर २५, २०७४
निर्वाचनपछि सुरु भएको संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारी खर्चको व्यवस्थापन अबका दिनमा चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । सीमित स्रोत र बढ्दो खर्चबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई आइलाग्नेछ । पूरा पढ्नुहोस्
भवसागर घिमिरे, भवसागर घिमिरे,
चितवन टाइगर्सले पृथु बाँस्कोटालाई टीभीएस एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेटका लागि कप्तान बनाएको छ । चितवन टाइगर्सका मालिक किशोर भट्टराईले पृथुजस्ता युवा खेलाडीलाई नेतृत्व दिन पाउनु आफ्नो टोलीका लागि गर्वको विषय भएको बताए । पूरा पढ्नुहोस्
स्पेनिस ला लिगाअन्तर्गत आइतबार लिगको अग्रस्थानमा रहेको बार्सिलोनाले भिल्लारियललाई २-० ले पराजित गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
युनाइटेडमाथि सिटीको किर्तीमानी जित
इंग्लिस प्रिमियर लिगअन्तर्गत आइतबार म्यानचेस्टर सिटीले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई २-१ ले पराजित गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
दुहबी गोल्डकपमा आइतबार आर्मीका नवयुग श्रेष्ठ मोरङ–११ का खेलाडीलाई छलेर बल निकाल्ने प्रयास गर्दै । तस्बिर : वेदराज पौडेल/कान्तिपुर
आर्मी टाइब्रेकरमा मोरङ ११ लाई पन्छाउँदै आइतबार मनमोहन दुहबी गोल्डकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
नेपाल गल्फ संघ (एनजीए) को आयोजनामा सोमबारदेखि फाल्डो सिरिज एसिया नेपाल च्याम्पियनसिपको छैटौं संस्करण सुरु हुने भएको छ । ३० गल्फरको सहभागिता रहने तीनदिने प्रतियोगितामा ३ विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पूरा पढ्नुहोस्
भारतमाथि श्रीलंकाको स्तब्धपूर्ण जित
श्रीलंकाका सुरन्गा लकमल भारतविरुद्धको खेलमा विकेटका लागि अपिल गर्दै । तस्बिर सौजन्य : आईसीसी
एएफपी, मंसिर २५, २०७४
फास्ट बलर सुरन्गा लकमलले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि श्रीलंकाले पहिलो वान–डेमा आइतबार भारतमाथि सात विकेटको स्तब्धपूर्ण जित निकालेको छ । लकमलले आफ्नो उत्कृष्ट वान–डे बलिङ गर्ने क्रममा १३ रन खर्चेर चार विकेट लिए र भारत १ सय १२ रनमा अउआलट भयो । पूरा पढ्नुहोस्
एन्फा चुनाव फेरि सर्‍यो
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन दोस्रोपल्ट सारेर १४ चैतमा गर्ने कार्यसमिति बैठकले आइतबार निर्णय गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
मोलुङ जलविद्युत्को परीक्षण प्रसारण
जिल्लाकै पहिलो जलविद्युत्का रूपमा निर्मित मोलुङ जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण प्रसारण थालिएको छ । ७ मेगावाट क्षमता भएको आयोजनाको आइतबारदेखि परीक्षण प्रसारण सुरु गरिएको हो ।
चुनावले धान खरिदमा बाधा
खाद्य संस्थान वीरगन्ज शाखाले यस वर्षको धान खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन । शाखालाई केन्द्रले यस वर्ष ३ हजार टन धान खरिदको कोटा दिएकामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको कारण शाखाले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नै गर्न नसकेको हो ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियमको मूल्यमा बुधबार रातिदेखि वृद्धि गरेपछि आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले पनि हवाई भाडामा इन्धन शुल्क बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
वीरगन्ज नाकाबाट अटोरिक्सा (टेम्पो) को आयात दोब्बर बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा टेम्पोको आयात बढेको हो । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आवको चौमासिक अवधिमा राजस्वमा योगदानको दृष्टिले मुख्य १० वस्तुको सूचीमा यो सवारी आठौं नम्बरमा परेको छ ।
राजधानीस्थित सिटी सेन्टरले ‘सीटी सेन्टर–विन्टर फेस्ट’ को आयोजना गर्ने भएको छ । डिसेम्बर १६ बाट एक महिनासम्म चल्ने ‘विन्टर फेस्ट’ मा ७ लाखदेखि ९ लाखसम्म आगन्तुक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको आयोजकले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । क्रिस्मस र नयाँ वर्षमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा विभिन्न चर्चित कलाकारहरूको सांगीतिक प्रस्तुति पनि राखिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राजु चौधरी, मंसिर २५, २०७४
सरकारी स्वामित्वको समस्याग्रस्त संस्थान नेसनल ट्ेरडिङ लिमिटेडले इन्धन व्यापारमा चासो देखाएको छ । सञ्चालनका लागि प्राप्त ४ विकल्पमध्ये संस्थानले इन्धन व्यापारलाई अगाडि बढाएको हो ।
माछापुच्छ्रे बैंक र बेलायतको सिफ्ट फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेडबीच रेमिटयान्स सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक सन्तोष कोइराला तथा सिफ्ट फाइनान्सियलका अध्यक्ष इदनान सबनले हस्ताक्षर गरेको जारी विज्ञप्तिमा छ ।
सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक र सेती फाइनान्सलाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा एकीकृत कारोबारको शुभाराम्भ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
न्यायपरिषद बैठकः न्यायाधीश नियुक्तिको प्रस्ताव - मंसिर २५, २०७४, ०८:५८ PMकाभ्रे र सिन्धुलीमा वामकै पकड - मंसिर २५, २०७४, ०८:५३ PMएमालेले भन्यो, ‘देउवा सरकारका अबका नियुक्ति बदर हुन्छ’ - मंसिर २५, २०७४, ०८:२५ PMगृह जिल्लामा दाहालको ‘कमब्याक’ - मंसिर २५, २०७४, ०८:१८ PMथोरै र धेरै मतान्तरले पराजित हुनेहरू - मंसिर २५, २०७४, ०८:०० PMउमंगबिनाको जित - मंसिर २५, २०७४, ०७:३७ PMपूर्व राजदूत उपाध्याय पराजित - मंसिर २५, २०७४, ०७:१५ PM
हरिहरसिंह राठौर, मंसिर २५, २०७४
पृथ्वीराजमार्गको मलेखु फुर्केखोला पुल नजिकै भएको मोटरसाईकल दुर्घटनामा दोला निवासी ३८ वर्षी शम्भु वस्नेतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ ।
२४ घण्टे हेल्पलाइन सञ्चालनमाप्याब्सन केन्द्रीय अध्यक्ष सम्बाहाम्फेलाई हराउँदै एमाले पूर्व अध्यक्ष कन्दङवा विजयी डोल्पाको समानुपातिक तर्फ पनि एमालेलाई दोब्बर मत प्राप्तघाइते पत्रकार भुसालको निधन
‘माई लभ’ हेर्ने एकलाई जापान जाने मौका
रिलिजको क्रममा रहेको फिल्म ‘माई लभ’ ले फिल्म हेर्ने दर्शकमध्येबाट छानिने एकलाई नि:शुल्क जापान घुम्न पाउने नयाँ अफर ल्याएको छ । फिल्मलाई जापानकै तोसिआकिइतोहले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्मले मुख्य पात्रबीचको प्रेममा विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएको असर र त्यसका लागि उनीहरूले गर्नुपरेको संघर्षको कथालाई मूल द्वन्द्वका रूपमा पस्किन खोजेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
स्रष्टाहरूले राजधानीमा आइतबार प्रजातान्त्रिक योद्धा रामप्रसाद राईको सम्झना गरेका छन् । रामप्रसाद राई स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा साहित्यकार प्रदीप नेपालले ‘राई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सच्चा क्रान्तिकारी योद्धा’ भएको उल्लेख गर्दै उनलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूरा पढ्नुहोस्
हुस्सुको याम सुरु हुँदै छ सहरमा । ललितपुर खुमलटार, साम्पाङचोकस्थित मिडलवे फिल्म प्रोडक्सनको स्टुडियोमा भने मोहन राईको चिन्ता बढ्दै छ । भित्ताको एउटा पोस्टरमा लैंगिक अल्पसंख्यक अञ्जली लामा मुस्कुराइरहेकी छन् । पूरा पढ्नुहोस्
बिहेपछि ‘डोमेस्टिक एनिमल’
बिहेपछि महिलाहरू त बदलिइहाल्छन् नै, पुरुषले पनि आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउँछन् । विवाहित जोडीले अलिकति यता, अलिकति उता गरेर आपसमा घनिष्ठता, विश्वास र समझदारी बढाउने काम गर्छन् । सेलेब्रिटीहरूका हकमा त यो कुरो झन् लागू हुन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
अर्जेन्टिनामा हुने ‘ब्युनस आइरस, २०१८ युथ ओलम्पिक गेम्स’ का लागि इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले तीन वटा नयाँ खेल थपेको छ । स्पोर्ट क्लाइम्बिङ, डान्स स्पोर्ट र रोलर स्पोट्र्स गरी अब युथ ओलम्पिकमा ३१ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । डान्स स्पोर्टभित्र ब्रेकडान्स राखिएको छ । यसका लागि अहिले छनोट खेलहरू भइरहेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्